Nloghachi nke Jizọs Kraịst maka September ma ọ bụ October 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Tupu dere banyere nloghachi nke Jesus Christ, ọ bụ uru icheta ihe isi of Christianity na karịsịa na-ebi ndụ okwukwe na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ.
Kraịst TO ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ
Mbụ ịbụ a Christian bụ ịghọta na Chineke bụ onye okike nke ihe nile, n’ihi ya ka ayi bu ihe okike Chineke.
Ọ na-ghọtara na Chineke kere anyị free na nnwere onwe ime nhọrọ nke mere na anyị na-ekpebi onwe anyị otú anyị na-eji nke a magburu onwe ya onyinye a Chineke nyere anyị « Life ».
Iji mma ịghọta Chineke na ihe e kere eke nke mmadụ, m òkù ka ị na-agụ m akwụkwọ « The Nkwusa King of Return Ọchịchịrị na-abịa ìhè » gụọ isiokwu banyere akwụkwọ: The Book – The Nkwusa ejila nke King
Chineke na ya enweghi ngwụcha ebere nyere anyị ihe a nile dị oké ọnụ ahịa « ndụ » dị mwute ikwu na obere ekele n’oge ya ezigbo ọnụ ahịa. Ndụ e nyere anyị site na Chineke na-enweghị achọ oké ihe ọ bụla si anyị n’aka ha. Ọ bụ a onyinye. Ma otu ụbọchị na ndụ-apụghị izere ezere mechie.
N’ihi na ụfọdụ, mwute ikwu na, na nke a bụ site na-eto eto na ndụ na-akwụsị, n’ihi na ndị ọzọ ha ruru blithely narị afọ ma ọ bụ karịa.
Mgbe ahụ, dị nnọọ mgbe oge nke mmadụ nwụọ, mkpụrụ obi na-egosi n’ihu ya kere.
Anyị aghaghị ịghọta na oge dị ihe okike Chineke, ya mere n’oge ọnwụ mkpụrụ obi abịarute ozugbo na oge nke ikpeazụ ikpe.
N’oge a ikpe atọ nhọrọ mgbe ahụ dị ka mkpụrụ obi.
Ụfọdụ ndị nwere a rụrụ arụ na-ndụ ga-idikwe eji mgbe ebighị ebi na hel.
Ihe ka nnọọ ọtụtụ nwere a ndụ ma dị ọcha ma ọ bụ ihe rụrụ arụ « Ọkụ » Otú o sina kwa ji na-eji mgbe ebighị ebi na hel.
Ndị na-eduga a ike ndụ na-akwanyere na ezi omume ga-aga n’agbanyeghị na ha bụ ezi ihe nlereanya ndụ eji mgbe ebighị ebi na hel.
Ịbụ Onye Kraịst bụ ịghọta na mkpụrụ obi niile na-ikpe na nwa na-eji mgbe ebighị ebi na hel. Ọ bụ ihe e ji n’aka!
Na m ihe ọ bụla ahapụ m ka m na-ekwu ma ọ bụrụ na hell ga-adị obere na-egbu mgbu n’ihi na ụfọdụ karịa ndị ọzọ dabere na omume mere n’oge ndụ ha.
Ọ dịghị adịghị ọcha nwere ike tinye ala-eze elu-igwe na dị ka anyị nile bụ ndị na-ebu mmehie mbụ na njedebe nke anyị na-anwụ anwụ ndụ on Earth, otú ahụ ka anyị na-niile ikpe-eji ndụ ebighị ebi n’ime hell.
Gịnị ga hell ọ dịghị onye kpomkwem maara, Otú ọ dị, ha n’akwụkwọ + Enoch anyị nwere otu nnyocha, a rịba ama na e nwere ebe dị n’eluigwe ma ọ na-ekpochi ebighị ebi niile e kere eke ndị ọ nupụụrụ Chineke isi.Jizọs Kraịst kwuru banyere hell-enye Gehenna (ma ọ dịghị ihe na-ekwu na Bible ihe kpọmkwem Gehenna) M na-eche na nke a nwere ike ịbụ hell na m isiokwu: nghọta aka ịghọta otú Chineke hell ,
A ga-atụ egwu na Hell bụ ebe ndu ebighi-ebi wezụga nke ịhụnanya Chineke. Kama ọ bụ ka n’okpuru na nlekọta nke ndị mmụọ ozi ya. (Gụọ akwụkwọ nke Enoch) https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/
Ịbụ Onye Kraịst bụ ịghọta na ọ bụ nanị na ịhụnanya Jizọs Kraịst nwere ike ime ka anyị nwee olileanya ịgbanahụ a hellish mgbe ebighị ebi ebe nketa zubere ndị Chineke na ụmụ mmadụ ebe ọ bụ na nnupụisi nke Adam na Iv.
Na-a Christian bụ onye mmehie na-aghọta na-anabata na–azọpụta site ịhụnanya Jizọs Kraịst, nke a hellish akara aka.
Ịbụ Onye Kraịst bụ ịnakwere na ndu dika ozizi nke Jesus Christ ke ịhụnanya, udo, ịhụnanya, ọmịiko na ịdị umeala n’obi.
Onye na-Kraịst na-ahụ baptizim n’ime mmiri, na Mmụọ Nsọ na ịmụ unu ọzọ.
Site na baptizim ime mmiri na anyị echegharịa ná mmehie anyị ma na-Jesus Kraịst ga-azọpụta site na ịnakwere ya n’anya ma na ọbara ahụ ọ wụsịrị ka anyị na obe.
Site na baptism nke mmụọ nsọ anyị na-arịọ Chineke ka o duzie ndụ anyị.Mgbe ịnweta mmiri baptism ndị Kraịst ga-eme ka a onye obibia n’ekpere iji rịọ Chineke ka o duzie ma jikwaa ndụ ya.
Ya mere, na-eje ije ná ndụ agaghịkwa ejikwa ọchịchọ ahụ ma ndị nke Mmụọ Nsọ. Nke a bụ baptism nke Mmụọ Nsọ.
N’ihi ya anyị na-mụrụ ọzọ na anyị ndụ n’ụwa na-achụ ná ndụ anyị na ịhụnanya, udo, ịhụnanya, ọmịiko na ịdị umeala n’obi. Ma na ịnụ ọkụ n’obi ha na-agbaso ozizi Jizọs Kraịst, na-eje ozi Chineke site n’ikiri o nyere n’iwu ma na-enyere ndị na-achọ enyemaka anyị. Ịkpachara anya enyemaka ị na-agaghị na-edu otu onye na-anata ya ka ọ nọgide na-mmehie ha na omume ọjọọ ha. Ma ọ na-edu gị ekweghị na ozizi Jizọs Kraịst.
Mgbe ị na-eme ka a enyemaka ị na-ahụ maka ojiji nke a ọsọ enyemaka.
N’ihi ya eziokwu nke na-enye ego ka a ọgwụ ọjọọ riri ahụ ma ọ bụ mmanya na-egbu ọ dịghị ka ị na-eche na ị na akafiakde ese na ezi omume. Ọ bụrụ na ọ jụrụ gị ego na-enye ya nri. Ọzọkwa eziokwu nke na-enye ego ka ndị na-eji ụmụ arịọ ghara iduga gị kwere na ị na-akafiakde a ezi ihe o mere. Ị na-ahụ maka nke a n’ụzọ ụmụaka.
Mgbe anyị ndụ n’ụwa, ndị Kraịst na-egosi n’ihu Chineke maka ikpe. Na site na ịhụnanya Jizọs Kraịst, ọ na-agaghị ogologo hell.
The Christian na-ekpe ikpe, ma ọ bụrụ na ọrụ nke ndụ ya dị mma, ọ ga-aga n’aka eze elu-igwe. Ọ bụrụ na ọrụ nke ya na ndụ adịghị mma, ọ ga-pọgatrị tupu abanye n’Alaeze Eluigwe. Ma ọ bụrụ na ọrụ nke ndụ ya bụ ndị ọjọọ ọ ga-aga hell ọ bụ ezie na ọ ghọrọ Onye Kraịst.
N’ihi na puku afọ abụọ a bụ ya mere.
Ma anyị bụ ndị na njedebe nke oge na ihe si gbanwee a bit.
Gịnị agbanwe bụ na na njedebe nke oge Jesus Christ ga laghachi n’uwa ibu eze n’ebe ahụ ruo otu puku afọ ahụ ga-ekewapụ ndị mmadụ nke ikpeazụ ikpe.
Na ezi Ndị Kraịst anyị na-eche nlọghachi Jesus Christ ke olileanya na ọ ga-abụ nnọọ anya.
Nke ọchịchị Kraịst nọ n’ụwa ga-a hụperetụ mgbe ebighị ebi, anyị ga-adị ogologo ndụ karị, ma ọ ka ga-agabiga ọnwụ n’ihu onye nwere ndu ebighi-ebi.
Ọjọ a ga-chụpụ ya na ụwa n’oge na narị afọ iri. Anyị ga-ebi n’okpuru ọchịchị Chineke na Ịhụnanya na Peace.
Ma, n’ihi na e nwere a kama, na ọ bụ dị ịrịba ama. Bụ na nloghachi nke Jesus Christ ga-dị ka na ihe mgbu nke ịmụ nwa.
Ya mere, n’elu nloghachi nke Jesus Christ dị nso na ogologo ndụ na-esiri ndi mmadu.
Anyị nile pụrụ ịhụ na dị ka afọ na-agafe, karịsịa ebe ọ bụ na 29 September 2008, na kasị siri ike obula. Lee m isiokwu: atọ ikpeazụ SIGNS nke nloghachi nke Jizọs Kraịst nọ n’ụwa!
Earth : ala ọma jijiji ga-emerụ ahụ oké ifufe, oké mmiri ozuzo, ifufe, oku, mgbanwe ihu igwe, mbuze, amaghị deafening ụzụ na ala collapses eke nnukwu crevices.
Igwe: meteorite dara, anyanwụ eruptions, ọkwa nloghachi nke Nibiru, oké okpomọkụ nke anyanwụ usoro mbara ala, UFO.
Wildlife : Dead unexplained ndị ọtụtụ nde kwa afọ si anụ ụlọ, na anụ ọhịa na anụ ufe na azụ.
Humanity : mbibi, ntiwapụ nke ọrịa, ọnwụ nke ụkpụrụ, Exodus, Violence, Agha na asịrị agha.
The Church : n’ezi ofufe dapụ bụ anya na kasị elu larịị. The Pope ka ajụwo ozizi nke Jizọs Kraịst site n’ịchọpụta ihe niile na okpukpe dị ka okporo ụzọ nile nke Chineke. N’ihi ya echefu okwu nke Jesus Christ,« Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ; ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma site m! «
Okwu ndị a Jizọs Kraịst dị ike na-adịghị ibinye onwe ha ka esemokwu ahụ.
Unknown deafening noises nwere ike tụgharịrị ka Apọkalips opì.Https://youtu.be/mTOQvDzihTU
Ihe a nile merenụ ime otú outsized na e buru n’amụma na Bible iji gwa ya ọgwụgwụ oge na nloghachi nke Jesus Christ.
E mere ihe nile Chineke ahụ ịkpọte ndi mmadu, ma dị mwute ikwu nnọọ ole na ole ka ihe ga-maara nke ndị pụrụ iche oge anyị bi.
Ndị ikom na-eche ihe banyere ihe ha ga-eme ọzọ izu ụka ma ọ bụ otú ha ga-emechi njedebe nke ọnwa, kama ikpeku Chineke ekpere maka nzoputa nke mkpụrụ obi ha, ọbụna n’etiti ndị Kraịst.
Ma nsogbu nile na-akpata ahụhụ site na nke ndi mmadu ga-aka njọ na ọbụna ruo mgbe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Egwu oge echere anyị tupu nloghachi nke Eze nke ndị eze Jesus Christ.
Anyị maara site inference na oge ikpeazụ tupu ya lọta ga-abụ ihe kasị taa akpụ.
Karịa mgbe ọ bụla, anyị aghaghị ikpe na-ekpe ekpere ugboro ugboro kwa ụbọchị.
Anyị kwesịrị ikele Chineke oge ọ bụla enyemaka na-ekpe ekpere ka Chineke na-eduzi ma na-echebe anyị na ọ bụla oge nke ndụ anyị, karịsịa Ka ihe ndị a na apocalyptic.
Ịbụ Onye Kraịst bụ ịghọta na ịhụnanya Jizọs Kraịst bụ n’aka awa site na Chineke iji zọpụta anyị na hell.
Na mgbakwunye na-azọpụta mkpụrụ obi anyị si hell site na ya hụrụ Jesus Christ ga-azọpụta ọtụtụ n’ime anyị tupu ya anụ ahụ laghachiri Earth.
Ndi ga-azọpụta ma ga-etolite na Church of Jesus Christ, ha ga-agbanwe n’otu ntabi obi na-adị ga-a ahu nke ìhè. Ha ga-ewepụ n’eluigwe na ga nweta kpọmkwem site n’ụwa na-ndu ebighi-ebi na-enweghị ọnwụ.
Ndị na-nwụrụ anwụ a dọtịrị ma ọ bụrụ na ha dị ndụ. Ga-akpọlite ​​n’ọnwụ n’ime ahu nke ìhè na a ga-ewepụ ke heaven na-adịrị ndị a zọpụtara ha dị ndụ.
Ọnụ ha na-aga alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ ga-abụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi ga-eme ka Jesus Christ na chọọchị ya kpụrụ.
Ọ bụrụ na Chineke na-agbalị eteta anyị-ahụ na e bụ na ihe ka ọtụtụ nwere ike-azọpụta ma na o nwere ike ịbụ akụkụ nke Church of Jesus Christ na a ga-ewepụ.
Jizọs Kraịst na Chineke n’anya nwoke ahụ!
Ma nwoke ya na ọ chọrọ ka na-eji ndụ ebighị ebi?
Ị na-eche maka otu oge na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ bụ na-enweghị isi, na ihe-àmà dị ọtụtụ, na njedebe nke oge na-n’ezie na-agba ọsọ na ọ dịghị ihe ga-akwụsị ya.
Jizọs Kraịst bụ n’ọnụ ụzọ ma ọ bụ oge maka olileanya ka a zọpụta, na-echegharị mmehie anyị, anyị misdeeds, ihe ọjọọ anyị mere, anyị na-emejọ na anyị ghara ịdị ọcha echiche.
Ọganihu ịrịba ama nloghachi nke Jizọs Kraịst
N’ihi ihe ndị progression nke ihe ịrịba ama na anyị bụ n’ezie na ikpeazụ na gbatia tupu nloghachi nke Jesus Christ.
Akọwaara m ha na m isiokwu atọ ikpeazụ SIGNS nke nloghachi nke Jizọs Kraịst nọ n’ụwa! E nwere ndị atọ ịrịba ama n’ihu nloghachi nke Jesus Christ.
01) The unveiling nke Anti-Christ
02) Nke atọ nwughari nke ụlọ nsọ dị na Jerusalem
03) A zuru ụwa ọnụ agha a ga-kwetara site Jesus Christ na nloghachi ya
N’ihi na nke mbụ ịrịba ama « mgbochi Kraịst » anyị aghaghị ịghọta na e nwere ọtụtụ ọkwa.
Mbụ n’ime chọọchị, àmà na-egosi na-kpụrụ nke niile nke soje eze poopu ebe ọ bụ na Lateran nkwekọrịta.
The ikpeazụ pope « François » personalizes a na-emegide Kraịst na n’okpuru guise nke Nwa Atụrụ ahụ bụ a wolf nke na-eduba Kraịst bụ ndị na-eso ogologo hell. Lee m isiokwu: Official Nkwupụta nke ọnwụ nke Chọọchị Katọlik
Dị ka amụma Malakaị nke poopu, Pope Francis bụ nke ikpeazụ pope.Onye ọ bụla nke na-aha ya bụ na amụma « Peter Rom », nke mere na chọọchị n’oge mkpagbu tupu e bibie Rome na nloghachi nke Jesus Christ.
The mbibi nke Rome apụtachaghị mbibi nke obodo Rome site a isi ala ọma jijiji, ma ida nke Europe dị ka ọhụrụ Rome « ndị eze nke asatọ nke Chapter XII nke Apọkalips akwụkwọ. » ya mere àmà na-egosi usoro.
Anyị maara site n’akwụkwọ nke Apọkalips na onye amụma Daniel, oké mkpagbu ikpeazụ 42 ọnwa.
Ya mere, dị ka Pope Francis a họpụtara March 13, 2013 anyị ga-ikekwe na-ahụ nloghachi nke Kraist ime Earth na September ma ọ bụ October 2016, eleghị anya n’oge mmemme nke opi.
Lee m isiokwu: ọgwụgwụ nke ikpeazụ izu nke DANIEL ọgwụgwụ ọgwụgwụ 2015 OR 2016
The mgbochi Christ bụkwa a ụdị ndị mmụọ ọjọọ na atọ n’ime otu nke abụọ ụmụ anụmanụ na onye amụma ụgha bụ onye nzube ya bụ ịkpagbu Ndị Kraịst na-eduzi ha ozugbo ihe n’okporo ụzọ nke hell.
Anyị nwere ike mfe ịghọta na-adịbeghị anya poopu bụ anụ ọhịa a kọwara na Book nke Apọkalips Chapter 17.
Site megide ụfọdụ na-ahụ Pope Francis amụma ụgha. Onwe m kweere na Pope Francis bụ otu n’ime mmadụ abụọ anumanu nke oké osimiri, na anụ ọhịa nke ụwa ịbụ ndị mbụ Pope Benedict XVI na ọtụtụ bụbu-Pope ka nọ ndụ. Ma ihe ndị amụma ụgha m maara nke nanị ya, onye na-eso ụzọ na-akpagbu Ndị Kraịst.
Ọ bụ na nke a na-akpọ « Mohammed » onye ezie nwụrụ anwụ na 632 mụrụ okpukpe ụgha nke na-eje ozi Islamists na jihadists.
Nke a nwughari bụ ezigbo ọchịchọ nke ndị Juu, ma Chineke agaghị ekwe ka nwughari nke temple nso ụlọ alakụba « al-Aqsa » nke okpukpe ụgha nke onye amụma ụgha.
The ọhụrụ temple ga-adị nsọ nke Jizọs Kraịst ga-ịgbada heaven« Jerusalem nke eluigwe »
Nke a bụ naanị na ndị ikpeazụ gbatia tupu nloghachi nke Jesus Christ.
O doro anya na nke a agha na malitere ebe ọ bụ na 2012. Anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ nke a ogu nke bụ ama globalized na-erite uru ndị dị ike na ọnụ ọgụgụ kwa ụbọchị.
Ọ bụ nke a esemokwu na-aga Jesus Christ na nloghachi ya.
Anyị bụ ndị na February na ihe a na-mara ọkwa na media dị anya n’ebe-emesi obi. Turkey na Saudi Arabia achọ ịga agha megide Syria. Ndị Russia na Iran emegide na-ekwe nkwa a laghachiri ọhụrụ ndị a akpati ozu belligerents ma ọ bụrụ na ha na-abịa Syria.
China n’ihi na ya omume nke agha megide US na ya jikọrọ aka na Africa na Syria na aku na uba na ubi. N’ihi na ya agha etinyeghi ke East forcefully, ọ bụ naanị a okwu nke oge na agha atụmatụ. O doro anya na Chinese ga-etinye aka na ihe nkwado nke Russian agha.
Ọ bụ na mbara ọzara nke Megido na Israel na Jizọs Kraịst dị ka Bible ga-akwụsị a agha .
Ya mere, mgbe ugbu a agha ejupụta Siria na Israel ga-ebuso. Mgbe ahụ a ga-enwe mkpu na anya mmiri ma ọ ga-abụ akaha abịa Jesus Christ na-azọpụta. N’ihi na a ga-enwe ihe ga-esi na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ na a ga-emezu na nloghachi nke Jesus Christ.
Na ọ bụ ike na ọ bụ na analysis nke ihe ịrịba ama, maka ọnwa nke September ma ọ bụ October, 2016.
N’afọ a 2016, anyị na-ama mara na ọ ga-adị njọ karịa 2015. Ọ bụrụ Christ ịbụ bụghị forthcoming na afọ a 2016, anyị kwesịrị ịtụ anya ihe egwu. Dị ka ndakpọ akụ na ụba, ma ọdachi nnukwu nha.
Ọ dịghị mgbe m na-ekpeghachi onwe m ezu, abụghị m onye amụma, na m na-ama ghọgburu ugboro ugboro ezubere iche a mkpirikpi maka nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site cons na na-ezighị ezi banyere nkpasu-iwe nke ihe ịrịba ama n’afọ ruo n’afọ .
Ka m ukwuu hiere ụzọ banyere mara ọkwa nke nloghachi nke Jesus Christ, m chọrọ ịkpachapụ anya na ị na-arịba ama, na Jizọs Kraịst ga-abịa dị ka onye ohi, ya mere ọ dịghị onye maara kpọmkwem mgbe a ga-nloghachi ya.
Nakwa dị ka m na-echere ya laghachiri afọ a na-ọnwa nke September ma ọ bụ October dị ka m analysis nke ihe ịrịba ama, ma m ga-asị na Jizọs Kraịst nwere ike na-abịa n’ihu na-chọọchị ya n’oge ọ bụla tupu nloghachi ya.
M ga na-ekwu na nke a nloghachi nwere ike ịbụ mgbe e mesịrị na-etinye aka n’ihe 2017 ma ọ bụ 2018 n’ihi na nke e nwekwara ihe ịrịba ama na m ga-akọwa mgbe oge ruru.
Wee jide n’aka,-ekpe ekpere ma nwee olileanya na-eru nso nloghachi nke Jesus Christ n’ihi na mee elu mee ya ga-alaghachi na obere mgbu ga-ejupụta n’ìhè maka umu mmadu.
N’afọ a 2016 bụ ezie esiri ụmụ mmadụ aka ka anyị Ndị Kraịst a afọ nke olileanya, nchegharị na ikpe ekpere na Jizọs Kraịst na-anọgide na anyị debara aha ha n’akwụkwọ n’akwụkwọ nke ndụ ebighị ebi.
Ichegharị na ọtụtụ mmadụ na-Christ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị chọrọ na-eji mgbe ebighị ebi na hel.
N’oge nke a edere onye ọ bụla nwere ike ka na-azọpụta. Chineke nyere gị free uche na nke a bụ oge na-ezi ụzọ ahụ.
-Abịa Jesus Christ site na-arịọ mmiri baptism ka a ụkọchukwu, pastọ ma ọ bụ a Christian na mgbe ekpe ekpere ugboro ugboro iji nweta nchebe nke Mmụọ Nsọ nke Chineke nyere gị aka, na-echebe gị na-eduzi Nzọụkwụ Gị na oké nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ nke ọchịchịrị.
Ịhụnanya, Peace na Ọṅụ na obi na ụlọ na atụmanya nke mwepụ nke Church n’ihi na ụfọdụ na nloghachi ke Obot Olive ke Jerusalem nke Onyenwe anyị na Eze Jizọs Kraịst, bụ nanị nwa nwoke nke Chineke n’ihi ya ọchịchị Eze nke ndị Eze nke ụwa ruo otu puku afọ kewara ndi mmadu doomsday.
M agba gị ume ịgụ m isiokwu:
Ọ BỤRỤ na Jizọs Kraịst onye na-adịghị bịa, Chọọchị akwụsị na-erughị otu ọgbọ!
Njedebe nke ikpeazụ izu nke DANIEL ọgwụgwụ ọgwụgwụ 2015 OR 2016
Ka oge bụ Ekpere m na-agba gị ikpe ekpere:
EKPERE Nna anyị na Ekele Marịa